Shiinaha LEDD730740 Saqafkii LED Dual Madaxa Qalliinka Caafimaadka ee leh hillaac aad u sarreeya Soo saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Wanyu
LEDD730740 Saqafkii LED Dual Madaxa Qalliinka Caafimaadka ee iftiinka hillaaca sare
LEDD730740 waxaa loola jeedaa nalka labalaabka nalka qalliinka caafimaadka.
Qolka qalliinka ee leh sanduuqa wax lagu sifeeyo, nooca petalku wuxuu ka fogaan karaa xannibaadda qulqulka hawada wuxuuna si aad ah hoos ugu dhigaa aagagga qulqulaya qulqulka hawada laminar. LEDD730740 nal qalliin caafimaad oo laba jibbaaran ayaa bixiya iftiinka ugu badan ee 150,000lux iyo heerkulka ugu badan ee midabka ee 5000K iyo max CRI ee 95. Dhammaan xuduudaha ayaa lagu hagaajin karaa toban heer oo ah guddiga xakamaynta shaashadda taabashada ee LCD. Qabashadu waxay ka samaysan tahay qalab cusub, oo u adkaysta heerkulka sare iyo cadaadiska sarreeya. Sii seddex gacmood oo guga ah, oo raqiis ah, oo qiimo jaban, oo heer sare ah.
Isbitaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah, shaybaarada, rugaha caafimaadka, iwm.
1. La jaanqaadi kara Nadiifinta Qulqulka Laminar
Nalalka qalliinka caafimaadka ee nooca petal-ka ayaa ka fogaan kara xannibaadda qulqulka hawada waxayna si aad ah hoos ugu dhigeysaa aagagga qulqulaya qulqulka hawada laminar.
Shayga iftiinka qalliinka caafimaadku waa nashqadeyn buuxda. Xakamaynta fiiqan waxay u adkeysataa heerkulka sare iyo cadaadiska sare, oo si adag u buuxiya shuruudaha jeermiska maalinlaha ah.
2. Cadaan isku qasan iyo Yellow Light
Isticmaalka nalalka iftiinka huruudda iyo caddaanka ah, nalka isku dhafan, wuxuu kobciyaa heerkulka midabka iyo muujinta midabka, wuxuuna ka caawiyaa dhakhaatiirta inay kala saaraan dhiigga iyo unugyada.
3. Iftiin Qoto dheer
Iftiinka qalliinka ee caafimaadku wuxuu leeyahay suus khafiif ah oo ku dhow 90% qaybta hoose ee qalliinka, sidaas darteed iftiin sare ayaa looga baahan yahay si loo hubiyo laydh deggan. Iftiinkaan qalliinka caafimaad ee laba-jibbaaran wuxuu bixin karaa illaa 150,000 oo iftiin ah iyo illaa 1400mm qoto dheer oo iftiin leh.
4. Habka La Qabsiga Smart
Heerkulka midabka, xoojinta iftiinka iyo muujinta midabka iftiinka qalliinka caafimaadka ayaa si isku mid ah loogu beddeli karaa guddiga xakamaynta LCD.
5. Quwadda Beddelaadda lagu kalsoon yahay
Wareejinta korantada oo leh sumcad caalami ah oo caan ah waxay si xasiloon uga shaqeysaa noocyada AC 110V-250V. Meelaha leh danab aan xasilloonayn, waxaan sidoo kale siinnaa fursado kale oo leh awood fara-gelin ah oo fara-gelin ah.
6. Xulashada Ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah
Qalabkan labada gacmood ee qalliinka caafimaadka ah, waxaa lagu heli karaa xakamaynta darbiga, kontoroolka fog iyo nidaamka soo celinta batteriga.
Hore: LEDD740 Saqafka Mount LED One Head OT Light oo leh Xakameyn Remote
Xiga: LEDD620620 Saqafka Nalka Dual Dome Qalabka Shaqeynta Caafimaadka ee leh Xakamaynta Darbiga
DL700 Halogen Tiyaatarka Operating Mobile Light wi ...
LEDD740 Saqafka Mount LED Mid Madaxa Head Light Light ...
LEDB740 Wall Mount LED Masraxa Tiyaatarka Qalliinka ...
LEDL740 LED hoos aan dhaqaajin karin OT Light la B ...